मानवअधिकारक’र्मीको नाममा यस्तो घिनला’ग्दो काम ! (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar Patrika Np
मानवअधिकारक’र्मीको नाममा यस्तो घिनला’ग्दो काम ! (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: शनिबार, बैशाख १८, २०७८ समय: २३:५२:४८
काठमाडौ । मानव अधिकारकर्मीको नाममा हुने गरेका दलाली डरलाग्दो रुपमा मौलाएको देखिएको छ । एउटै समुहवाट समस्यामा परेकाहरु अहिले दिनहुँ मिडियामा आउन लागेका छन् । कलाकार किशोर खतिवडा र उनको प्रेमीका लक्ष्मी गदालबीच समस्या पारेर उनीहरुसंग पैसाको लागि वार्गेनिगं गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि हामी पनि यसरी नै समस्यामा परेका छौं भन्दै थुप्रै ब्यक्ति सार्वजनिक भएका छन् । कल्पना केसी नाम गरेकी महिला पनि लक्ष्मी गदाललाई फकाएर किशोर खतिवडासंग १० लाख रुपैया माग्न लगाएको समुहले मलाई पनि समस्यामा पारे भन्दै मिडियामा आएकी छन् ।
उनको श्रीमान सुन्दर कुमार केसी ५ महिना देखि हिरासतमा छन् । नारायण पौडेल र उनको श्रीमती अञ्जु नाम गरेकी महिला मिलेर आफुलाई समस्यामा पारेको कल्पनाको भनाई छ । सो समुहमा आफुलाई महिला मानवअधिकारकर्मी बताउने सृजना वाग्ले पनि सहभागी भएको देखिएको भिडियोमा कल्पनाले बताएकी छन् । लक्ष्मी गदालले उनीहरुको वारेमा वास्तविकता वताएपछि आफुलाई पनि हिम्मत आएर उनीहरुका बारेमा खुलाउन हिम्मत आएको बताएकी छन् ।
कल्पना भन्दा पहिला एक जना पूर्व आर्मी रामकुमार खत्री पनि आफुलाई अञ्जुलाई नराम्रो म्यासेज पठाएको आरोपमा अदालत धाइरहेको भन्दै सार्वजनिक भएका थिए । कल्पना, पूर्व आर्मी रामकुमार खत्री र लक्ष्मी गदालको घटनामा एउटै समुह संलग्न भएको देखिएको छ । त्यसमा मानवअधिकारकर्मी बताउने सिर्जना वाग्ले समेत रहेको उनीहरुले बताएका छन्